Hlola i-Osaka, Japan - World Tourism Portal
Hlola i-Osaka, Japan
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili e-Osaka, Japan.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-Osaka
Bukela ividiyo ekhuluma ngo-Osaka
Hlola i-Osaka idolobha lesithathu ngobukhulu kulo Japan, enabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-2.5 ezigidini endaweni yayo enkulu yedolobha. Yidolobha eliphakathi nendawo lesifunda saseKansai nelikhulu kunazo zonke lesithathu sika-Osaka-Kobe-Kyoto.
If Tokyo inhloko-dolobha yaseJapan, umuntu angabiza i-Osaka ngokuthi yi-anti-capital yayo. Noma ngabe ikubiza kanjani, kepha, kunamathuba amaningi okuthola isimilo sawo sangempela.
Umbozwe kakhulu ngokuthinteka kwedolobha, ungaqala ukusuka lapho uthatha imisindo yolimi lwesigodi sase-Osaka, oluzwe ngabantu njengoba ugibela ama-escalators emi ngakwesokudla, esikhundleni sobunxele eTokyo; bese uthola umehluko wokudla okudumile empumalanga yeJapan, njengoba ubheka izindawo zokudla kwasemini. Ukujula okuthola ngaphakathi, futhi ekugcineni kokuhlala kwakho, akunakwenzeka ngokuphelele ukuthi kungenzeka ukuthi usuhlanganisile uhlu lwakho lwangempela lwezizathu ezihlanganisa umlando, amasiko, ezemidlalo, ukuya ebhizinisini.
Ama-Osaka aqala emuva enkathini ye-Asuka neNara. Ngaphansi kwegama elithi Naniwa, kwakuyidolobha elincane iJapan 645-655, 661-667 futhi ekugcineni kwaba yi-744-745 AD. Ngisho nangemva kokuba inhlokodolobha yathuthelwa kwenye indawo, u-Osaka uqhubekile nokudlala indima ebalulekile njengendawo yokuhamba komhlaba, olwandle nokuhamba ngemijondolo yomfula. Ngenkathi yeTokugawa, ngenkathi iTokyo yayisebenza njengesihlalo esinamandla samandla empi futhi Kyoto kwakuyindlu yenkantolo ye-Imperial nabaphathi bayo, u-Osaka wasebenza njenge "Khishi Lesizwe" (tenka-no-daidokoro), indawo yokuqoqa nokusabalalisa irayisi, isilinganiso esibaluleke kakhulu somcebo. Ngakho-ke futhi kungumuzi lapho abathengisi benza khona futhi belahlekelwa yimali futhi bazinaka ngentshiseko izexwayiso eziphindaphindwayo ezivela kubaphangi ukuze banciphise ukusetshenziswa kwabo okubonakalayo.
Ngesikhathi seMeiji, osomabhizinisi abangamesabi u-Osaka babehola phambili ekuthuthukisweni kwezimboni, bekwenza kufane Manchester e-UK Ukushayelela ngokucophelela eMpini Yezwe 2 kushiye ubufakazi obuncane balesi sikhathi esedlule esihle kakhulu - ngisho nenqaba iyakhiwa kabusha okucashile - kepha kuze kube namuhla, ngenkathi kungafakazeki futhi kuyinkimbinkimbi ebusweni, i-Osaka isalokhu iyindawo enhle yokudla, ukuphuza neqembu , futhi endabeni (uma kungenzeki) ama-Osakans asabingelelana ngayo mōkarimakka?, "Wenza imali?".
Isifunda esaziwa kakhulu sezitolo i-Osaka iShinsaibashi, enikezela ngokuhlanganiswa kwezitolo ezinkulu zeminyango, izitolo ezinkulu zamaphethelo zaseNtshonalanga, nezindawo zokuphumula ezizimele ezisukela kushibhile kuya kubiza kakhulu. Ngaphakathi kweShinsaibashi, indawo yaseMelika "muraor" American Village "idume kakhulu phakathi kwentsha futhi kuvame ukuthiwa ingumthombo wokuziphatha kwentsha kwabaseJapan. Eduze naseMelika-mura, iHorie iyisitha esithengisa izitolo zemikhiqizo yaseJapan. Izitolo eziningi eMeda zithandwa kakhulu ezindaweni ezinesitayela, ikakhulukazi esakhiweni seHep Five nesaseHep Navio esiseduze nesiteshi saseHankyu Umeda, yize lezi zitolo zivame ukubiza kakhulu ukubamba izintshisekelo zabvakashi. Kule ndawo, kwakhiwe izakhiwo ezintsha zokuthenga kungekudala
Okwezintambo zikagesi, indawo yaseNipponbashi eningizimu-mpumalanga yeNamba, futhi ikakhulukazi umgwaqo wokuthenga “iDen-Den Town”, wake wabhekwa njenge-Akihabara entshonalanga neJapan; kulezi zinsuku, abantu abaningi bangathanda ukuthenga kwikhamera entsha, enkulu ye-Yodobashi e-Umeda noma iBicCamera kanye ne-LABI1 eNamba, yize iNippombashi isanikeza amadili amahle kumagajethi amaningi, izakhi ze-PC kanye ne-elektroniki yezimboni ezintsha.
Ngezincwadi zaseJapan nezangaphandle, zama iKinokuniyain Hankyu Umeda Station noma iJunkudo eningizimu kwesiteshi sase-Osaka.
Isitolo esisemthethweni seHanshin Tiger (iqembu le-baseball) sisezingeni le-8th leSitolo soMnyango seHanshin eMeda.
I-Tenjinbashi-sujiShopping Street (UTenjinbashi-suji Shōtengai) kuthiwa yiyona ende kunazo zonke eqondile futhi emboziwe yezitolo eJapan cishe. I-2.6km. I-Arcade iqhubekela enyakatho-eningizimu eceleni kwesitaladi i-Tenjinbashi-suji futhi ifinyeleleka kusuka eziteshini zangaphansi ezingaphansi kanye / noma i-JR, isb, i-Tenma, iMinami-Morimachi, iTenjinbashi-suji 6-chome, njll. Ayihloselwe ukubonwa, i-arcade iyindawo ebukhoma umbukiso wempilo ka-Osaka yansuku zonke, ovulekile kusukela esikhathini se-Edo.
UDon Quijote (noma uDonki, mangaki amaJapane awubiza kanjalo) uyisixhumi sesitolo esinciphile nesimnandi kakhulu ngezitolo ezingaphezu kwe-400 eJapan, Hawaii futhi Singapore. Nomaphi lapho Osaka uya khona, uzothola esinye sezitolo zazo. UDon Quijote uvame ukuthengisa noma yini. Ukusuka ezintweni zomkhiqizo ngaphezulu kwemithi, amasudi, izembatho, izinto zikagesi, amathoyizi amadala kuya emilanjeni neziphuzo. Uma ufuna ukuthenga izikhumbuzo, izitolo zabo ziyindawo engcono yokuthola noma yini oyidingayo. Amagatsha amathathu eDon Quijote e-Osaka Namba aphakathi kwezitolo ezixakeke kakhulu zentela kulo lonke elaseJapan. Isitolo seDotonbori esifundeni sokuzijabulisa esidumile sinesondo le-Ferris ophahleni lwayo olunikeza ukubuka okuhle kulo lonke elaseNamba.
Okukhethwa okubanzi kakhulu kwezindawo zokudlela ezisezifundeni eziphambili zokuzijabulisa zase-Osaka, okugcwele kakhulu kuzo zonke izindawo eziseMeda naseDōtonbori.
Ngisho esizweni esinama-gourmands agourmands u-Osaka waziwa njengendawo enhle yokudla, eyisibonelo yi-Osakan maximum kuidaore, "Zidle uzonakalise". Indawo enhle yokuzama kuidaore cishe i-Dōtonbori kanye neHōzenji-yokochō noma iSoxemon-yangumakhelwane, indawo yonke equkethe cishe yonke into ngaphandle kwendawo yokudlela eyodwa ngemuva kwenye.
Isitayela se-Okonomiyaki Osaka (Ukudla kwe-DIY) kuvame ukuzenzela ukudla ezindaweni zokudlela ezincane, ezizimele ezikhethekile. Amatafula afakwe amapuleti ashisayo afakwe futhi uzothola isitsha sezithako, okulindeleke ukuba uwupheke uwedwa. Kodwa-ke, ngamaketanga amakhudlwana anezinhlaka eziningi abasebenzi bangakuphekela yona - futhi nasezindaweni ezincane abasebenzi bavame ukukusiza ngentokozo uma bebuzwa.
Uma kwenzeka uthatha isinqumo sokuzama inhlanhla yakho wedwa, ungahle ufune ukugqoka umcimbi: izingcezu zenyama yengulube, okokusonga okuvame kakhulu, kuvame kunamafutha kakhulu futhi kuthambekele ekugcobeni uwoyela endaweni yonke. Zama iModernyaki eyi-Okonomiyaki eneSoba phezulu, noma uye iqanda elithosiwe phezulu kwepanishi.
Ukudla okujwayelekile okuzama ukuzama kufaka phakathi:
IBattera, luhlobo lwe-block eyi-sushi, olufakwa ama-mackerel elayisi bese lifakwa kanzima ebhokisini lokhuni, elisikwe izingcezu lapho lisizwa. IBatteraI-sushi iyinzalo ehlukile futhi eqondile ye-sushi yakudala, lena evela e-Osaka ihlukile ngokuma kwayo okufana nesikwele. Akutholakali kuphela ezindaweni zokudlela ze-sushi kepha futhi njengokuthatha izitolo zomnyango naseziteshini zezitimela.
Okonomiyaki, amakhekhe eklabishi othosiwe afana nesiphambano phakathi kwepanini likanokusho, i-pizza ne-omelette.
Takoyaki, izingcezwana ze-octopus ngaphakathi kuma-dumplings othosiwe.
Kushikatsu, ama-skeuts anezinhlobonhlobo zokudla (inyama, imifino, ushizi, njll.) okuthosiwe ngokujulile e-panko futhi akhonza nge-tonkatsu isoso.
I-Okonomiyaki idliwa kahle ezindaweni zokudlela ezisegodini, kanti i-takoyaki idliwa kangcono kakhulu kusukela ezinqoleni zabathengisi basemgwaqweni, ezitholakala kuzo zonke izifunda ezinkulu ezungeza ubusuku. Indawo ekahle yokuthola i-kushkatsu ise Shinsekai, phakathi kweDobutsuen-mae kanye neziteshi ze-Ebisucho emgqeni ongaphansi komhlaba weSuisuji.
Kunezifunda eziningi ezihlala ebusuku e-Osaka. Ukuphila ebusuku e-Osaka kudume kakhulu.
IKitashinchi Le ndawo, eseningizimu nesiteshi sakwa-JR Osaka, iyisikhungo sasebusuku esidumile kakhulu nezokuzijabulisa i-Osaka yanamuhla. Kufana neTokyo's Ginza, egcwele amakhulu amabha asezingeni eliphakeme, amaklabhu nezindawo zokudlela ezincane lapho osomabhizinisi baseJapan bejabulisa amakhasimende abo.
IDōtonbori Le ndawo yisikhungo sokuphila kobusuku.